देशको बदनाम गर्दै राजदूत | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति १९ पुष २०७५, बिहीबार १२:३० लेखक नेपाली जनता
तत्कालीन माओवादी नेताहरुलाई आर्थिक प्रभावमा पारी उनी राजदूत बनेकी थिइन् । आफ्नै चालकसँग विवाद भएपछि उनको गतिविधि बाहिर आएका हुन् । तर, शेर्पाले आफू निर्दाेष रहेको र चालकलाई निकालेपछि विवादमा पार्ने प्रयास गरेको बताएकी छिन् । पद जोगाउन उनी यतिबेला दौडधुपमा लागेकी छिन् । जसकारण छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको एक हप्ता हुँदा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले उनको बारेमा निर्णय गर्न सकेको छैन । यसअघि पनि राजदूतहरु विवादमा परेका थिए । कतारलाई खुला जेल भनेको आरोपमा मायादेवी शर्मालाई पाँच वषअघि सरकारले फिर्ता बोलाउनुपरेको थियो । कृषि विकास बैंककी सामान्य कर्मचारी रहेकी उनलाई माओवादी नेताहरुले नै चलखेलका आधारमा त्यसरी राजदूत नियुक्त गर्दा देशको बेइज्जत भएको थियो ।
उनीजस्तै शर्मिला ढकाललाई पनि तत्कालिन फोरम(लोकतान्त्रिक)को कोटामा कुबेवका लागि सिफारिस गरिएको थियो । उनको पनि विरोध भएको थियो । तर, उनी अनुमोदन भइन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत नियुक्तिका लागि बेला बेलामा नयाँ मादपण्ड बनाउने गरेको छ । तर, राजनीतिक भागबन्डा र आर्थिक चलखेल नै राजदूत नियुक्तिको प्रमुख मापदण्ड हुने गरेको छ । देशका क्षमतावान व्यक्तिहरु छन् । तर, नेताहरुको चाकडी नगरेकाले उनीहरुलाई राज्यले चिन्दैन । जब क्षमतावान व्यक्तिले राज्यले जिम्मेवारी दिएर सम्मान गर्छ, तब न उनीहरुले देशका लागि कही गरौैं भनेर लाग्छन् । जो आर्थिक चलखेलका आधारमा नियुक्त हुन्छन् उनीहरु पैसा कमाउनै केन्द्रीत हुने गरेका छन् ।
सोही कारण कतिपय राजदूतहरु आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी मानव तस्करीमा समेत संलग्न हुने गरेका छन् । प्रोटेकल र कन्सुलरको बारेमा न्यूनतम ज्ञान नभएकाहरु समेत राजदूत बनेर खटिएपछि उनीहरुले देशका लागि धेरै गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
प्रतिमा र शर्मिला किन जोगिए ?
तर, कांग्रेसकै पालामा नियुक्त भएका अन्य दुई ‘क्षमताहीन’ निकम्मा राजदूतलाई भने फिर्ता बोलाईको छैन । जापानकी प्रतिभा राणा र ओमानकी शर्मिला ढकाल पराजुली । राणा राप्रपाको राजनीतिमा आबद्ध थिइन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सासु भएकाले उनलाई राजदूत बनाइएको हो । देउवाकै आग्रह कारण उनलाई अहिले सरकारले फिर्ता नबोलाएको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । त्यस्तै कुबेतकी राजदूत शर्मिलाले पनि नेकपाका नेताहरुलाई प्रभावमा पारेकाले उनलाई पनि फिर्ता नबोलाइएको स्रोत बताउँछ ।
उपनिर्वाचनको प्रारम्भिक तयारी: सरकारले मिति तोके चुनाव गराउन तयार
काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले जनप्रतिनिधिविहीन रहेका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन गराउन प्रारम्भिक तयारी अघि बढाएको छ ।
हुम्ला । भौगोलिक हिसाबले विकट राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग नजोडिएको हुम्लामा मङ्गलबार अपराह्न दुर्घटना भएको जिप खोजी गर्न गोताखोर हुम्ला…
आईजीपी फेर्न नेकपाभित्र गोप्य छलफल
काठमाडौं . प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई हटाउन प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरुले गोप्य छलफल अघि बढाएको…
कालोपत्रे गरेको एका सातामै घाँस उम्रियो, अख्तियारद्वारा अनुसन्धान शुरू
धनगढी । निर्माण गरेको साता नपुग्दै धनगढी उपमहानगरपालिका–७ स्थित सद्भावना मार्गको कालोपत्रे सडकमा घाँस उम्रिएको छ ।
भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक गुरुङसहित दुई भूमाफियाको सम्पत्ति छानविनमा
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले भाटभटेनी सुपरमार्कटकका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङ तथा दुईजना भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीमाथि…
मेलम्ची पाइप परीक्षणः पाइप बिछ्याउने कामसँगै जाँचको काम समेत अगाडि बढाइयाे, तीन चार प्रतिशत ‘लिकेज’को समस्या !
काठमाडौं । बुहचर्चित तथा बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पाइप बिछ्याउने कामसँगै पाइप जाँचको कामलाइ समेत अगाडि बढाएको छ । आयोजनाले…